बुवाआमासँगै खेतमा गएका दुई बालकको पानीमा डु’बे’र मृ’त्यु ! - Public 24Khabar
Home News बुवाआमासँगै खेतमा गएका दुई बालकको पानीमा डु’बे’र मृ’त्यु !
बुवाआमासँगै खेतमा गएका दुई बालकको पानीमा डु’बे’र मृ’त्यु !
धनुषा र महोत्तरीमा पानीमा डु’बे’र तीन बालकको मृ’त्यु भएको छ।
मृ’त्यु हुनेमा धनुषामा एकै परिवारका दुई बालक रहेका छन्। धान रो’प्न आमाबुवासँगै खेतमा गएको बेला नजिकै रहेको म’ख’ना’हा नदीमा नु’हा’उ’ने क्रममा डु’बे’र दुबै बालकको मृ’त्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ।
धनौजी गाउँपालिका–५ बहुअर्बाका श्रीकिशुन कापरका आठ वर्षीय छोरा राकेश कापर र दिपु कापरका छ वर्षीय छोरा आशिकको मृ’त्यु भएको हो । दुबै श’व पो’स्ट’मा’र्ट’मका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा राखिएको छ। त्यसैगरी, महोत्तरीको जलेश्वरमा पोखरीमा डु’बे’र एक बालकको मृ’त्यु भएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका अनुसार जलेश्वर–५ बस्ने चार वर्षीय आ’रु’ष कापर आफ्नै घरदेखि एक किमि पश्चिममा रहेको पोखरीमा डु’बे’र मृ’त्यु भएको हो। बालक डु’बे’को खबर प्राप्त भएपछि तत्काल प्रहरी चौकी प’र्सा’प’तै’ली र जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीबाट प्रहरी गएर बालकको उ’द्धा’र गरी उपचारार्थ जिल्ला अस्पताल जलेश्वर पठाइएको थियो।
उपचारको क्रममा बालकको मृ’त्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। एक महिनाअघि धनुषाको मु’खि’या’प’ट्टी मुसहरनिया गाउँपालिकामा खा’ल्डोमा डु’बे’र एकै पटक पाँच बालिकाको मृ’त्यु भएको थियो।
Previous articleमा’धव नेपालको घर भित्रै छिर्ने युवा’संघको चे’ता’वनी, किन ज’लाए चि’ता (भिडियो हेर्नुहोस)
Next articleभारतबाट आयो देउवालाई मोदीको फोन: मोदीले फोनबाटै यसोभनेपछि देउवाको यस्तो जवाफ !Pm deuba & Modi (भिडियो हेर्नुहोस)